Qorshaha Daryeelka Badbaadada ah (POSC) waa dariiqa gudbin toos ah oo cusub kaas oo ku xidha dhallaanka ay la kulmaan walaxda ka hor iyo daryeelayaashooda adeegyada Help Me Grow Washington. Barnaamijka ayaa si rasmi ah loo daah furay 1-dii Diseembar si qoysas badan ay ugu xirmaan agabka muhiimka ah ee bulshadooda.
Sababo la xiriira sharciga isbeddelka sannadihii la soo dhaafay, tirada dadka dhallaanka ah ee u baahan POSC way ka bateen dhallaanka la kulma walxaha sharci darrada ah oo hadda ay ku jiraan dhallaanka la kulmay walax kasta. Halka qoysaska ku dhaca xaq u yeelashadan cusub ha dammaanad qaadin u gudbinta Adeegyada Ilaalinta Ilmaha, waa muhiim in ay helaan taageerooyinka lagama maarmaanka u ah si loo yareeyo khatarta marka ay ilmahooda guriga keenaan oo ay qoyskooda ku hayaan oo ay koraan.
Haddi dhallaanku ku dhasho walaxda maandooriyaha balse aanay jirin wax walaac ah oo nabdoon oo uu go'aamiyo bixiyaha, waxa loo gudbin doona Help Me Grow Washington adeegyada iyo taageerada duuban. Adeegyada ay qoysasku ku xidhi karaan waxaa ka mid ah baadhista korriinka, ilaha cuntada, caymis caafimaad oo bilaash ah ama qiimo jaban, ama uurka, waalidnimada, naasnuujinta, iyo agabka tallaalka. Dabagalka qoysaska ayaa sidoo kale dhici doona si wax looga qabto baahi kasta oo dheeri ah iyo in la hubiyo in helitaanka agabku uu ahaa mid lagu guulaystay.
Daah-furkan bilawga ah waxa ku jiri doona POSC 13 cosbitaal oo dhalmada ah ee gobolka oo dhan, iyada oo hirgelinta gobolka oo dhan la qorsheeyay horraanta 2022. Waaxda Carruurta, Dhallinyarada iyo Qoysaska ee Gobolka Washington Waxa kale oo ay bilaabi doontaa mareegaha POSC horraanta 2022 halkaas oo dadku ay wax badan uga baran karaan barnaamijkan.